Manome Toromarika An’i Trump I Ahmadinejed, Filoha Iraniana Izay Voaloton’ny Hosoka Ny Fifidianana Azy tamin’ny 2009 · Global Voices teny Malagasy
Manome Toromarika An'i Trump I Ahmadinejed, Filoha Iraniana Izay Voaloton'ny Hosoka Ny Fifidianana Azy tamin'ny 2009
Voadika ny 22 Marsa 2017 7:09 GMT
Nanome sosokevitra tao amin'ny taratasy misokatra ho an'i Donals Trump i Ahmadinejad. Sary avy amin'ny kaonty Telegram an'i Mamlekate.
Nanoratra taratasy misokatra nanome sosokevitra ho an'ny Filoha Amerikana Donald Trump ilay Filoha Iraniana taloha Mahmoud Ahmadinejad ny 27 Febroary teo, filoha izay nalaza be fa voaloton'ny tsy fanarahan-dalàna ny nahavoafidy azy indray ka niteraka ny Hetsika Maitson'ny 2009.
Ny dua (vavaka fanaon'ny silamo), mangataka ny hanafainganana ny fahatanterahan'ny faminanian'i Mahdi ( ilay mpamonjy ny silamo ao amin'ny bokin'ny Shiite) no fiantombohan'ilay taratasy. Tantarain'i Ahmadinejad, izay zatra manoratra taratasy tsindraindray tamin'ireo filoha amerikana no sady manaiky izany rahateo, milaza amin'i Trump fa ho fiovàna amin'ny zava-misy any Amerika amin'izao fotoana izao no fahitany ny fahalaniany.
Any amin'ny faramparan'ilay taratasy aaza dia amporisihiny i Trump mba hanaja ireo firenena hafa, hanaiky ny fahasamihafàna ary hampitsahatra ny politika mahery setran'ny fandidiana ireo firenena hafa :
Indrisy anefa fa ny fiheverany ny tenany ho ambony noho ny hafa no nataon'ireo mpitondra an'i Etazonia nifanesy, nikaroka ny fampandrosoana ny fanjakana amin'ny fanakànana ny an'ny hafa, niezaka hampanan-karena sy hanasoa ny vahoaka amerikana amin'ny fiankinandoha amin'ny fahantran'ny hafa, nitady ny haja amam-boninahitra sy ny halehibeazana amin'ny fanalana baràka ny hafa, ary nitady ny fiarovana an'i Etazonia ao anatin'ny fanakorontanana ny hafa… Mino aho fa tsy afaka hanohana politika sy fisehoana tahaka izany ny vahoaka Amerikana, sady tsy afaka hanaraka ny fanalàna baràka, ny fahantrana, ny fikorontanan'ny hafa ary tsy afaka haka ny haren'ny hafa… Ilaintsika ny manaja ny firenena rehetra sy ny kolontsainy, tahaka izany ihany koa ny finiavany sy ny tombontsoany raha hikaroka fanavaozana marina sy maharitra. Ilaintsika ny mizara ny fahasambaran'ny firenena, tahaka izany ihany koa ny fangirifiriany. Ilaintsika ny mikatsaka ny fitoviana sy ny firahalahiana eo amin'ny samy firenena sy manaja ny zon'ny firenena, tahaka izany ihany koa ny fialàna amin'ny fanaovana tsinontsinona sy ny fiezahana hifehy ny firenena hafa.
Tsy vao sambany izao no nisy Iraniana mpitondra ambony nitsikera am-pahibemaso ny politikam-pitantanan'i Trump ho manavakavaka, toy ilay fandraràna ny dian'ireo firenena fito be mpino Silamo mampiady hevitra. Nofaritan'ny mpitarika faratampony, ny Ayatollah Khomeini, i Trump tany aloha hoe “miasa ho antsika amin'ny fanehoana ny tena endrik'i Etazonia.”
Mitosaka ny fanehoankevitra momba ilay taratasin'i Ahmadinejad, hatramin'ny nivoahany, ao amin'ny haino aman-jery sosialy Iraniana.
Nanoratra tany amin'i Donald Trump i Ahmadinejad, izay toa tsy faly tamin'ny fanimbàna 8 taona nataony an'i Iràna .
Betsaka ireo Iraniana naneho ny fitserany hatramin'ny nahalanian'i Trump, amin'ny fampitahàna ny valo taonam-paharatsiam-pitondran'i Ahmadinejad sy ny fitantànan'i Trump (jereo 4:04 ao amin'ilay lahatsary mpaka tahaka “Amerika aloha… fa ahoana ny amin'i Iràna ?”).
Misy hafatra amin'ny fiteny Persiana ironana be ao amin'ny Twitter nanasongadina ilay fahazarana hafahafa manoratra taratasy ananan'ilay filoha taloha :
این علاقه به نامه نگاری با رئیس جمهورهای آمریکا و سایر کشورها طبیعی نیست… #احمدی_نژاد pic.twitter.com/fLQB268UPL
Tsy ara-dalàna io fahalinana amin'ny fanoratana taratasy ho an'ireo filoha Amerikana sy ireo firenena hafa io…
Mitovy amin'io ny taratasy nalefan'i Ahmadinejad ho an'ireo mpitarika eto amin'izao tontolo izao io, tahaka ilay taratasy iray malaza nosoratany ho an'ny Filoha Amerikana taloha Barack Obama tamin'ny 2016 nilazany fa tsy nitàna ny teny nomeny momba ny hamerenana indray ny fifamatorana amin'i Iràna izy :
Tena mampalahelo fa tsy nety tanteraka mihitsy ireo fanambarànao mazava tsara ny hetsika ataonao… isan'izany ny fanambarana am-pahibemaso sy an-tsoratra ny hamerenana indray ny fifamatorana amin'ny firenena Iraniana, ary ny hanonerana ny enimpolo taona nanaovan'ireo fitondrana Amerikana tsindry hazolena sy habibiana tamin'ny firenena Iraniana.
Nampiarahana tamin'ny fahavitan'ny fifanarahana ara-nokleary iraniana, natao sonia teo ambany fitarihan'i Obama avy any Etazonia sy ny Filoha Iraniana tony fihetsika, Hassan Rouhani, io taratasy eo ambony io. Nanaovan'i Ahmadinejad sarisarin-teny ny tsy rariny hitany tao amin'ny fitsaràna amerikana izay namoaka didy fa tokony harotsaka ho an'ny fianakavian'ireo niharan'ny fipoahana tao amin'ny tobin'ny tafika an-dranomasina Amerikana tany Libanona tamin'ny 1983, izay nahafatesana miaramila amerikana 241, ny fanànan'ny Iraniana nogiazan'i Etazonia. Ny Hezbollah, vondrona mpiady islamista Shiita sady antoko politika any Libanona izay notohanan'ny governemanta Iraniana sy novatsiany vola no tompon'antoka tamin'ilay fanapoahana.
Ilay taratasy tamin'ny 2016 dia te- handrava ny fahombiazan'ny fitondrana Rouhani tamin'ny fahavitan'ny fifanarahana ara-nokleary, izay fahombiazana nalaza nanerana an'i Iràna, satria nanamaivana ireo sazy sady nanokatra varavarana tena ilaina eo amin'ny sehatra maro ara-toe-karena. Nihamafy ny sazy nihatra tamin'i Iràna fony fitondran'i Ahmadinejad, ary tamin'ny androny, tsy nisy fivoarany ny fifanarahana ara-nokleary teo amin'i Iràna sy ireo firenena hafa tafiditra amin'izany.
Angamba andrana iray hafa ataon'ilay filoha teo aloha mba hanambaniana ny Filoha Rouhani, ity taratasy vaovao ho an'i Trump ity, indrindra fa akaiky ny volana May 2017, fifidianana Filoham-pirenena any Iràna. Nilaza i Ahmadinajed tamin'ny Septambra 2016 fa tsy afaka mifaninana, rehefa avy nampitandreman'ny Filoha faran-tampony fa mety hiteraka fisaraham-bazana sy fivakisana tsy misy fanàfany amin'ny fiarahamonina Iraniana ny filatsahany ho fidiana. Nanao fampielezankevitra ho an'ny lehiben'ny kabinetrany, Esfandiar Mashei, i Ahmadinejad rehefa tsy nahazo nirotsaka ho fidiana intsony tamin'ny 2013. Na teo aza izany, dia tsy nankatoavin'ny Filànkevitra Mpanaramaso sady tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra faran'ireo mpilatsaka ho fidiana ho filoha i Mashei. Heverina fa amin'ny 2017 dia hanao ezaka tahaka izany ho an'ny filoha lefiny teo aloha, Hamid Baghaei, i Ahmadinejad.